बुटवलमा कृषि मेला सुरु – www.janabato.com
२१ माघ २०७५, सोमबार १३:३६ February 4, 2019 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
प्रदेश नम्वर ५ को भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि बुटवलमण्डपमा कृषि मेला २०७५ सुरु भएको छ ।
बजारमुखी कृषिको आधार, समुन्नत नेपालको पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ २६ गतेसम्म चल्ने मेलाको प्रदेश नम्वर ५ का मुख्यमन्त्रि शंकर पोखरेलले बिरुवामा पानी सिचित गरी उदघाटन गरे ।
मेलाको उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्रि पोखरेलले प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले प्रदेशको बिकासको पहिलो आधार कृषि र त्यसपछी उद्योग र पर्यटन रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्रि पोखरेलले कृषिको व्यवसायीककरणका लागि किसानलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।
मेलामा गाउका उत्पादनदेखि कृषिका प्रबिधिका एक सय २६ स्टलको सहभागिता रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिम बहादुर हमालले जानकारी दिए ।
मेलाका अवसरमा ६ दिनसम्म बुटवलमण्डपमा कृषि केन्द्रित प्रतियोगिता, अन्र्तक्रिया गोष्ठि र सचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि आयोजना गरीदै छ । मेलामा प्रदेश नम्वर ५ को उद्योग पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बुटवल उपमहानगरपालिका र किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम प्रबद्र्धकको भुमिकामा रहेका छन ।
← प्रदेश नम्बर ५ ले मनायो ‘प्रदेश सभा’ दिवस
के हुन् एमाले–माओवादी केन्द्र एकताका आधारहरु ? (७ बुँदे प्रतिवेदन सहित)
२८ चैत्र २०७४, बुधबार ०७:११ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on के हुन् एमाले–माओवादी केन्द्र एकताका आधारहरु ? (७ बुँदे प्रतिवेदन सहित)
एमाले–माके भारतीय साम्राज्यवादको दलाल भएको पुष्टि – नेता चन्द
२१ माघ २०७४, आईतवार १३:२६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on एमाले–माके भारतीय साम्राज्यवादको दलाल भएको पुष्टि – नेता चन्द
त्रिसुलीमा खस्यो बस, ६ जनाको मृत्यु १२ घाइते
१३ मंसिर २०७४, बुधबार ०१:४४ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on त्रिसुलीमा खस्यो बस, ६ जनाको मृत्यु १२ घाइते